Sunvoda လက်အောက်ခံ သည် ဘက်ထရီ ဖက်စပ် လုပ်ငန်း ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည် – Pandaily
Sunvoda လက်အောက်ခံ သည် ဘက်ထရီ ဖက်စပ် လုပ်ငန်း ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
Jun 20, 2022, 12:08ညနေ 2022/06/20 14:24:34 Pandaily
Power Battery ထုတ်လုပ်သူ Senvoda က ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်း၏ လက်အောက်ခံ Senvoda လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ Co., Ltd မှ (Senvoda EVB)Dongfeng Motor Company နှင့် Dongfeng Hongtai Holding Group Co., Ltd. တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင် နေသည်။ အထူးသဖြင့် Dongfeng Motor Company Group သည် Dongfeng Hongtai Holding Group ၏ ၈၇. ၂၄% ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
ကြေငြာ ချက်အရ ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး မှာ ယွမ်သန်း ၅၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄. ၇၅ သန်း) ဖြစ်သည်။ အခြား ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုနှင့် ၄ င်းတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန်အတွက် ဤ အဖွဲ့အစည်း သည် ဘက်ထရီ ဆဲလ်များ၊ module များ နှင့်စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ များ နှင့်ဆက်စပ်သော အစိတ်အပိုင်း များအတွက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Sunvoda EVB ၊ Dongfeng Motor Company နှင့် Dongfeng Hongtai Holding Group တို့သည် ၅၁% ၊ ၃၅% နှင့် ၁၄% အသီးသီး ထည့်ဝင် ရန်ရည်ရွယ် ထားသည်။
တကယ်တော့ ဖက်စပ် မတည် ထောင် မီ Sunvoda သည် Dongfeng Motor Company နှင့်နီးကပ်စွာ လုပ်ကိုင် ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၁ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာအရ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ ရှိ လူသိများသော မော်တော်ကား ထုတ်လုပ် သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စျေးကွက် အမျိုး မျိုးရှိ ပင်မ မော်ဒယ် များတွင် ဖောက်သည် များနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပူးတွဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ယန္တရား တစ်ခု ထူထောင် ခဲ့ ကြောင်းဖော်ပြသည်။ မိတ်ဖက် များတွင် Renault ၊ eGT New Energy Vehicle Co., Ltd., Geely, Dongfeng Motor Company စသည်တို့ပါဝင်သည်။
Senvoda သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး lithium-ion battery module များထုတ်လုပ် ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော တရုတ်နိုင်ငံ ၏ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီ များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ lithium battery cells နှင့် module များ၏ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှု များဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ လုပ်ငန်းကို တရားဝင် စတင် ဖြန့်ဖြူး ခဲ့ပြီး စားသုံးသူ ဘက်ထရီ မှ ပါဝါ ဘက်ထရီ သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏လည်ပတ် မှုမှ ၀ င်ငွေ မှာယွမ် ၃၇. ၃ ၅၉ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၅. ၈၂% တိုးလာပြီး အသားတင် အမြတ် မှာယွမ် ၉ ၁၆ သန်း ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၄. ၁၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၂ ၉၃ သန်း ရှိပြီး စုစုပေါင်း ၇. ၈၅% ရှိသည်။ ၎င်း၏ ဘက်ထရီ ၀ င်ငွေသည် အချိုးအစား အနည်းငယ်သာ ရှိသော်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၅ ၈၄. ၆၇% ဖြင့် အမြန်ဆုံး တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်း သည်တဖြည်းဖြည်း ကုမ္ပဏီ၏ တိုးတက်မှု ဝင်ရိုးစွန်း ဖြစ်လာသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Senvoda သည်တရုတ် lithium-ion ဘက်ထရီ စီမံကိန်းတွင် ယွမ်သန်း ၂၃၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ Sunvoda သည် စွမ်းအင် ဘက်ထရီ လုပ်ငန်း နယ်ပယ် ၏ အဆင်အပြင် ကို အရှိန်မြှင့် တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ အကုန်တွင် ကုမ္ပဏီ သည်စုစုပေါင်း ယွမ် ၅ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုဖြင့် Geely နှင့် Zhejiang Jirun Automobile Co., Ltd. တို့နှင့် ဖက်စပ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်း ပြီးဆုံး ပြီးနောက် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ် နိုင်စွမ်း မှာ ဟိုက် ဘရစ် ဘက်ထရီ ၈၀၀ ၀၀၀ ဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လတွင် ကုမ္ပဏီက စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း တည်ဆောက်ရန် နန် ချ န်း တွင် ယွမ် ဘီလီယံ ၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
တ႐ုတ္ လွ်ပ္စစ္ ကား ကုမၸဏီ Hozon Auto က NETA S ေမာ္ဒယ္ ကို ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ထားေသာ "Tangong Battery" ျဖင့္ တပ္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။